Aamin, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Iimaanku waa udub dhexaadka nolosha Christian. Rumaysadku macnaheedu waa aaminaad. Waxaan si buuxda ugu aamini karnaa badbaadadayada. Axdiga Cusubi wuxuu si cad inoogu sheegayaa inaanaan xaq u lahayn wax kastoo aan qaban karno, laakiin aan si fudud u aamino Masiixa, oo ah Wiilka Ilaah.
Rooma 3,28: XNUMX, rasuul Bawlos wuxuu qoray:
Haddaba waxaan u malaynaynaa in ninku aanu xaqdarro ahayn oo uusan xaq ku lahayn rumaysadka.
Badbaadadu annaga kuma tiirsanaan adigu, laakiin keliya Masiixa. Haddii aan Aaminno Ilaah, maahan inaan isku dayno inaan wax qarka u saarno nolosheenna ka qarinno isaga. Annagu kama cabsanno Ilaahay xitaa haddii aan dembaabno. Halkii laga baqi lahaa, waxaan aaminsanahay inuusan waligiis joojin doonin jacaylkiisa, na caawinayo, iyo inuu naga caawiyo inaan ka adkaano dembiyadayada. Haddii aan Ilaah aaminno, waxaan ku siin karnaa kalsooni buuxda inuu isagu nagu beddeli doono qofkii aan ugu jeednay inaan noqonno. Markaan Ilaah aaminno, waxaan ogaan karnaa inuu isagu yahay muhiimadda ugu sarreysa, sababta iyo maaddada nolosheena. Sidii Bawlos ku yidhi kuwa reer falsafada ah ee Athens: Waxaan ku nool nahay, waxaan u lebisnahay oo ku jirnaa Ilaah.
Aad ayey noogu muhiimsantahay wax kasta oo kale - oo ka qiimo badan hantida, lacagta, waqtiga, sumcadda iyo xitaa noloshaan wanaagsan. Waxaan aaminsanahay in Eebbe ogyahay waxa inoo fiican anagana waxaan rabnaa inaan ka farxinno. Waa bartilmaameedkayaga, aasaaskeenna nolol macno leh. Waxaan rabnaa inaan ugu adeegno cabsi, eexumayn jacayl, laakiin jacayl - ee aan ahayn rabitaan la'aan, laakiin si farxad leh xorriyadda xorta ah. Waxaan aaminsanahay xukunkiisa. Waxaan aaminsanahay eraygiisa iyo jidadkiisa. Waxaan aaminsanahay inuu ina siinayo qalbi cusub, si aan ugu sii dayno isaga, inuu inaga yeelo waxa uu jecel yahay oo aan ku ixtiraamo waxa uu jecel yahay. Waxaan aaminsanahay inuu had iyo jeer jecel yahay oo uusan waligeen naga tanaasulin. Mar labaad, waligeen awood uma yeelan karno inaan ku sameeyno wax uun tanoo keligiis ah. Waa Ciise kan waxaas ku sameeya annaga iyo innagaba, xagga gudaha, xagga shaqada beddelista Ruuxa Quduuska ah. Marka loo eego doonista Ilaah iyo ujeedkiisa, waxaynu nahay carruurtiisii ​​uu jeclaa, oo laga soo furtay laguna iibsaday dhiigga qaaliga ah ee Ciise.
1 Butros 1,18: 20-XNUMX, rasuul Butros wuxuu qoray:
Maxaa yeelay waad ogtahay inaadan laydinku soo furanayn lacag iyo dahab kumeelgaadh ah oo is beddel ah oo aan waxtar lahayn oo sidii awowayaashiin ahayd, laakiin laguugu beddelay dhiigga Masiixa qaaliga ah oo ah id aan waxba galabsan oo buunbuunin leh. In kasta oo loo doortay kahor duniddii la aasin, waxay isu muujisaa dhammaadka wakhtiga adiga daraaddaa aawadaa.
Waxaan ku kalsoonaan karnaa Ilaah ma ahan oo keliya waqtigan xaadirka ah, laakiin sidoo kale mustaqbalkeenna iyo mustaqbalkeenna. Ciise Masiix, aabahayaga jannada ku jira ayaa naftayada oo dhan badbaadiya. Sida ilmo yar oo cabsi la'aan ah oo ku qanacsan gacmaha hooyadiis, waxaan ku nasan karnaa si nabad ah jacaylka Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah.